Raha ny vaovao voaray, dia mbola hisy ny fiaramanidina ho any ejipta ho an’ireo olona hiatrika io lalao ampahefa-dalana io. Efa manomboka ny fisoratana anarana sy ny famandrihan-toerana ho an’ireo olona tsy mbola nandeha ka manam-pikasana ny hanohana ny ekipa Malagasy na ireo izay mbola te handeha hihazo an’i Ejipta. Tsy miova ny saran-dalana fa mijanona ho 2.200.000 ariary, raha 298000 ariary kosa ny visa. Mety hitombo ny fiaramanidina mandeha amin’io, fa miankina ny isan’ny olona izany, hoy ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika.Ho an’ny Air Madagascar manokana, dia efa nanomboka omaly maraina ny fisoratana anarana tao amin’ny Air Madagascar. Raha ny vaovao voaray farany, dia anio amin’ny 12 ora atoandro no fara-fisoratana anarana ary manainga anio alina ihany ny fiaramanidina hitondra ireo mpanohana ny ekipa Malagasy ary miverina eto an-tanindrazana ny zoma aorian’ny lalao ataon’ny Barea sy ny Tonizia izy ireo.